France na -ebubata ụgbọ elu mgbapụ site na Kabul ruo Paris site na Abu Dhabi
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » France na -ebubata ụgbọ elu mgbapụ site na Kabul ruo Paris site na Abu Dhabi
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Clement Beaune, onye ode akwụkwọ mba France nke European Affairs
Ruo ọtụtụ afọ ugbua, France nọ n'ọnọdụ mbụ na Europe niile gbasara inye ndị Afghanistan mgbaba na mpaghara ya.
France na -edobe àkwà mmiri ikuku iji wepụ ndị mmadụ na Afghanistan.
Ụgbọ elu mgbapụ nke France ga -esi na Kabul gaa Paris site na Abu Dhabi.
French ka ọpụpụ 'puku' si Afghanistan.
Onye odeakwụkwọ mba France na -ahụ maka ihe gbasara mba Europe bụ Clement Beaune kwuru taa na France na -ehibe àkwà mmiri iji wepụ 'puku' mmadụ site na Kabul, Afghanistan gaa Paris.
“Ka ọ dị ugbu a, iji nye ndị mmadụ ọpụpụ, France na -ekepụta akwa ikuku n'etiti Kabul na Paris nwere ụgbọ elu ga -efegharị Abu Dhabi, "Beaune kwuru.
“Ugbu a, anyị enweghị ọnụ ọgụgụ zuru oke nke mmadụ ole a ga -achụpụ Afghanistan na France. N'ọnọdụ ọ bụla, o doro anya na anyị na -ekwu maka ọtụtụ puku mmadụ chọrọ nchekwa, "ka ọ gbakwụnyere.
Onye odeakwụkwọ nke steeti kwuru na France “amalitela ịpụpụ ndị Afghanistan na May na iji chebe mmadụ 600 na -arụrụ ya ọrụ.”
“Ruo taa, ụgbọ elu ndị agha atọ nke France ebupụla ihe dị ka mmadụ 400. Ndị a bụ ọkachasị ndị Afghanistan chọrọ nchekwa ngwa ngwa. N'ozuzu, ọtụtụ n'ime ndị Afghanistan a rụrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ French dị iche iche, "ka o kwuru.
Dị ka Beaun si kwuo, France “ji ọrụ zuru oke were nnabata ndị Afghanistan na mpaghara ya.” "N'afọ ndị na -adịbeghị anya, anyị enyela arịrịọ 10,000 maka mgbaba n'aka ndị Afghanistan. Ruo ọtụtụ afọ ugbua, France nọ n'ọnọdụ mbụ na Europe niile gbasara inye ndị Afghanistan mgbaba na mpaghara ya, "onye ọrụ ahụ kwukwara.
“Anyị ga -aga n'ihu na omume a. Enweghị mmachi ngụgụ dị na mpaghara a. Omume nke ịnata ndị Afghanistan na ala French ga -aga n'ihu mgbe akwa ikuku nke mba a kwụsịrị ịdị, "onye odeakwụkwọ steeti kwenyesiri ike.